Banyere Anyị - Shenzhen Eyin Technology Co., Ltd.
Shenzhen Eyin Technology co., Ltd. e guzobere na 2008, a na-eduga Sound mmanya factory dị na Shenzhen, China. Anyị nwere ihe karịrị ndị ọrụ 100, gburugburu 5000 square mita nke oghere oghere.
Anyị na-elekwasị anya na ịmepụta, ịmepụta ma mepụta Ogwe ụda, ndị na-ekwu okwu na mgbasa ozi na obere ọkà okwu. Ngwaahịa mmepụta ikike RMS sitere na 5W ruo 200W na n'elu. Anyị na ngwaahịa ndị OA, iru RoHS, LVD & EMC, ERP, FCC, KC, BQB gbaara na anyị factory bụ ISO na BSCI gbaara.
Anyị nwere ọkọlọtọ omumuihe, niile elu na ngwá, ọkachamara R & D otu, na magburu onwe ya mma akara usoro iji hụ na ngwaahịa mma na ngwa ngwa nnyefe. E wezụga, anyị na-na-na-emepe emepe nke anyị pụrụ iche, ejiji na asọmpi ngwaahịa, a ga-enwe 5 ma ọ bụ 6 ụdị ọhụrụ ngwaahịa maka ahịa ụwa kwa afọ.
Kemgbe nguzobe ahụ, anyị na-etinye ọfụma na aha mgbe niile n'ọnọdụ kacha mkpa iji duru anyị gaa n'ihu. anyị na-enye ngwaahịa dị elu maka onye ọlụlụ anyị. anyị ugbua ebupụtara enyi na enyi mmekọrịta mmekọrịta na ndị ahịa na Europe, USA, North America, South America, Africa, Middle East na Asia.
Anyị ji obi ụtọ nabata niile n'ọnọdụ jụrụ si n'ụlọ na mba ọzọ na-akwado anyị, na-atụ anya gị akwụkwọ ozi.
Karaoke Soundbar, WiFi Soundbar N'ihi Tv, Tv Soundbars, Alexa Soundbar, Ugwu Tv na Soundbar, Ndị na-ekwu okwu Wifi Soundbar,